NgoMsombuluko, Okthoba 7, 2013 Douglas Karr
Okusanda kuthengwa yi-IBM, Xtify iyinhlangano yesikhulumi sokwazisa soqobo lwe-iOS, i-Android, iWindows neWebhu Yeselula.
Xtify isiza abathengisi ukuletha izaziso zohlelo lokusebenza ezifanele futhi ezenzakalayo ukushayela nokubandakanya ukwenza imali, ukugcina umkhiqizo wakho uphezulu kwengqondo. Okuqukethwe kungathunyelwa ngamandla kususelwa kumasegmenti wamakhasimende, indawo, nokuziphatha. Zonke izici ziyatholakala ngedeshibhodi elungele ukuthengisa noma API yemilayezo eyenziwe ngesistimu.
Iminikelo evela ku- Xtify zihlanganisa:
Izaziso Zomdabu Newebhu - hlanganisa izaziso eziqondisiwe kuwo wonke amawebhusayithi akho kanye naku-iOS yakho yangokwendabuko, i-Android, iBlackBerry, kanye nezinhlelo zokusebenza zeWindows.
Izimbangela Zomcimbi Nendawo - Sebenzisa isimilo sekhasimende ngalinye lendawo nendawo yokuhlala, bese unameka izingxenye zamakhasimende ukushayela izenzo ezinengqondo ozifunayo.
Push, SMS kanye Passbook - Bandakanya amakhasimende akho eselula esiteshini esifanele bona. Ukuzibandakanya komkhiqizo weDrayivu, ukusetshenziswa kohlelo lokusebenza nokwenza imali ngamathuluzi alungele ukuthengisa.
Isilinganiso Sesikhathi Sangempela - Thola umkhankaso, uhlelo lokusebenza neleveli yomsebenzisi analytics. Qonda ukuthi imilayezo yakho ikwenza kanjani ukuxhumana komkhiqizo nezenzo ozifunayo.
Ama-Enterprise engagmeents afaka imikhankaso nemiyalezo engenamkhawulo, izingxenye zamakhasimende ezingenamkhawulo, i-Geo-Targeting engenamkhawulo ne-Real-time Geo-Triggering, ukuqaliswa kwe-QA, ukuqeqeshwa, ukuxhaswa komkhankaso kanye nomdabu (i-iOS, i-Android, iBlackBerry, iWindows) neWebhu (Iselula, Ithebula, Ideskithophu ) Izaziso, i-SMS kanye ne-Passbook.